China Yakakwira inoshanda inobata surfactant Alkyl polyglucoside 50% -70% APG 0810 cas 68515-73-1 fekitari uye bhizimisi | Dzidziso
Yepamusoro inoshanda inobata surfactant Alkyl polyglucoside 50% -70% APG 0810 cas 68515-73-1
ZVEMAZARA APG 0810 inyoro nyoro nonionic inogadzira inogadzirwa kubva kune inogadziriswazve miriwo mbishi zvigadzirwa, iri yakaderera chepfu, isina inogumbura uye nyore nyore kuora. Kuita kwakanakisa kusanganisira detergency, wetting, muchiaparadzira uye kuenderana, kunyanya kupupa furo. Iyo zvakare inoratidza yakanakisa alkaline uye electrolyte kuramba uye inogona kugadzirisa zvimwe zvinoshandiswa. Iyo pH inogona kutsanangurwa maererano nezvinodiwa nevatengi.
Chigadzirwa Chigadzirwa: APG 0810
Giredhi: 50% - 70%
Aqueous solution yealkyl polyglucosides yakavakirwa pane yakasarudzika mafuta doro C8-C10
INCI zita: Capryl Glucoside CAS-Kwete.: 68515-73-1
Anoreva zvakafanana: Decyl Glucoside Chitarisiko: Chiedza cheyero viscous mvura
ZVEMAZARA APG 0810 inyoro nyoro nonionic inogadzira inogadzirwa kubva kune inogadziriswazve miriwo mbishi zvigadzirwa, iri yakaderera chepfu, isina inogumbura uye nyore nyore kuora. Kuita kwakanakisa kusanganisira detergency, wetting, muchiaparadzira uye kuenderana, kunyanya kupupa furo. Iyo zvakare inoratidza yakanakisa alkaline uye electrolyte kuramba uye inogona kugadzirisa zvimwe zvinoshandiswa.
Iyo pH inogona kutsanangurwa maererano nezvinodiwa nevatengi.
Chigadzirwa Chigadzirwa: APG0814
Aqueous solution ye alkyl polyglucosides yakavakirwa pane yakasikwa mafuta doro C8-C14
INCI zita: Coco Glucoside
Chitarisiko: Yero, yakashoshoma uye inonaya mvura NATURALAPG 0814 inoratidza hunhu hwakadzika hwehunhu. Nekuda kwezviri mukati mezasi alkyl cheni glucosides, NATURALAPG 0814 inogona kuchengetwa uye kugadziriswa pazasi
kutonhora matanho (> 5°C).
NATURALAPG 0814 inogona kugadzirwa zviri nyore nekuti haina kuratidza chikamu chejel pamusoro pekupora. Nokuderedza kukosha kwepH, semuenzaniso, necitric acid kusvika pazasi pe8.5 iyo Cloudiness iri yakanangana nechigadzirwa inonyangarika nekudaro zvichigonesa kuumbwa kwezvakajeka zvigadzirwa. Mvura inogadziriswa yeNATURALAPG 0814 haigone kuomeswa nekuwedzera NaCl. Mukubatana ne anionic surfactants iyo viscosity inogona kuvandudzwa ne electrolyte yekuwedzera.
Chigadzirwa Chigadzirwa: APG1214
C12 - C14 mafuta doro glucoside
INCI zita: Lauryl Glucoside
Chitarisiko: ine makore mashoma uye inoyevedza mvura Iyo turbidity yechigadzirwa inoenderana nemusanganiswa wayo magnesium oxide yezvinyorwa (max. 600 ppm magnesium) uye iyo pH kukosha kwayinopihwa. Iyi turbidity haina zvakaipa zvinokanganisa zvigadzirwa zvigadzirwa uye inonyangarika kana iyo pH kukosha kwayakachinjika kuita pazasi 7. NATURALAPG 1214 is a nonionic surfactant ine yakanaka dermatological kuenderana uye viscosity inowedzera mhedzisiro. Naizvozvo inokodzera kushandiswa sechiwedzero kana co-surfactant mune yekushambadzira inogadzira yekuchenesa gadziriro.
25kg / dhiramu, 200kg / dhiramu, 900kg / IBC TANK
Chiedza Yero Liquid
Solid zvemukati (%)
pH kukosha (20% mu15% IPA aq.)
Mahara emafuta doro (%)
Sulphate dota zvemukati (%)
Kuwandisa (g / cm3, 25 ℃)
Pashure: Inoshanda emulsifier CO40 Ethoxylated hydrogenated castor mafuta CAS 61788-85-0
Zvadaro: Benzalkonium Chloride (ADBAC / BKC 50%, 80%) cas 8001-54-5 kana 63449-41-2
China fekitori inopa mutengo wakanaka 99% DMA Dimethyl ...
Mutengo wakanaka Cocamide DEA / cocamide diethanolamin ...
Mutengo wakanaka 99% Sodium tert-butoxide cas 865-48-5
Mutengo wakanaka antioxidant HN-130 CAS 69938-76-7
Yakakwira mhando 99% uye 99.5% vanadium pentoxide (...
yepamusoro 99,9% tantalum (v) chloride upfu Ta ...